Travel to ဘန်ကောက် - ကမ္ဘောဒီးယား ၄ ညအိပ် ၊ ၅ ရက် in ကမ္ဘောဒီးယား, ထိုင်း - Odyssey Travels
Starting from USD / pax
ဘန်ကောက် - Siem Reap - Angkor Wat
၄ ညအိပ် ၊ ၅ ရက်
ခရီးစဉ် အသေးစိတ် ပါ၀င်သော မပါ၀င်သော ၀န်ဆောင်မှု ဘွတ်ကင် အခြေအနေများ ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ Comments ဘွတ်ကင် တင်ကြမယ်!
Home » Travels » ကမ္ဘောဒီးယား » ဘန်ကောက် – ကမ္ဘောဒီးယား
Day 1: Arrival Bangkok (L/ D)
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ဘန်ကောက်မြို ့သို ့ရောက်ရှိသည်နှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်မှနွေးထွေးပျူငှာစွာလာရောက်ကြိုဆိုပါမည်။ ထို့နောက် Madame Tuessuds ဖယောင်းပြတိုက်သို့ သွားရောက်လေ့လာကြပါမည်။ထို့နောက်အဝတ်အထည် ဖန်စီဒီဇိုင်းမျိုးစုံနှင့် နာမည်ကျော် Branded ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုစုံလင်စွာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်သော MBK နှင့် Tokyu Shopping Mall တို့တွင် လွတ်လပ်စွာ စျေးဝယ်ထွက်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Hotel တွင် Check in ၀င်ပါမည်။ ခေတ္တအနားယူပြီးနောက် ညနေပိုင်း တွင် ကျောက်ဖယားမြစ်၏ အလှကိုကြည့်ရှုခံစားရင်း အပျော်စီးသင်္ဘောစီးနင်းကာ ဘူဖေးညစာသုံးဆောင်ပါမည်။ ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Hotel တွင်အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။
Day 2: Emerald Buddha – Shopping (B/ L/ D)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ထိုင်းဘုရင့် နန်းတော်နှင့် မြဘုရားတို ့သို ့သွားရောက် လည်ပတ် ဖူးမြော်ပါမည်။ ထို့နောက် 3Dရုပ်လုံးကြွပန်းချီကားများရှိရာ Art in Paradise သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် အဝတ်အထည်နှင့် ဖန်စီဒီဇိုင်းဆန်းများကို စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် လက်လီလက္ကားဝယ်ယူနိုင်သော Platinum Shopping Mall သို့ သွားရောက်ကာ လွတ်လပ်စွာစျေးဝယ်ထွက်ကြပါမည်။ ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်တွင်အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 3: Bangkok – Cambodia – Siem Reap (B/ L/ D)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက် Cambodia နိုင်ငံသို့သွားရောက်နိုင်ရန် ဟိုတယ်မှစတင်ထွက်ခွာပါမည်။ ထို့နောက် ပထမဦးစွာ ဘန်ကောက်နှင့်ကမ္ဘောဒီးယား နယ်စပ်ဖြစ်သော Poi Pet Border သို့၄နာရီခန့်ကားစီးကာ သွားရောက်ကြပါမည်။ Poi Pet သို့ရောက်ရှိသည်နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ Siem Reap သို့သွားရောက်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာကို Local Restaurant တွင် ကမ္ဘောဒီးယားအစားအသောက်များဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ ထို့နောက် Siem Reap သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာ ပါမည်။ Siem Reap သို့ရောက်ရှိသည်နှင့်ဟိုတယ်တွင် Check – in ပြုလုပ်ပါမည်။ ညစာကို Angkor Mondial Restaurant တွင် ယဉ်ကျေးမှုကပွဲများ ကြည့်ရှုရင်း သုံးဆောင်ပါမည်။ ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် မိမိတို့စိတ်ကြိုက်စျေးဝယ်ထွက်နိုင်ရန် Pub street သို့ သွားရောက် ကြပါမည်။ ထို့နောက် ဟိုတယ်သို့ ပြန်လာ၍အေးချမ်းစွာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 4: Siem Reap – Angkor Wat Sightseeing (B/ L/ D)
နံနက်ပိုင်းတွင် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်စာရင်းဝင် အန်ကောဝပ်ဘုရားကျောင်းသို့သွားရောက်ကာ နေထွက်ချိန်ရှုခင်းကိုကြည့်ရှုပါမည်။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် မြင်ကွင်းများနှင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးကိုနောက်ခံထားကာ အမှတ်တရဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးပြီး နောက် နံနက်စာသုံးဆောင်ရန် Hotel သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာလာပါမည်။ နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးသည်နှင့် The South Gate of Angkor Thom သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ ထို့နောက် Bayon , Baphoun, Phimean Akas, The Royal Enclosure, Terrace of Elephants နှင့် Leper King စသည့်နေရာများသို့သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာကို Local Restaurant တွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက် နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး အင်ဂျနီနာဂျိုလီပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ထားသော Tomb Raider ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့ရာ Ta Prohm ဘုရားကျောင်း သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ ထိုမှတဆင့် Srah Srang နားတွင်ရှိသော Pre Rup တွင် နေဝင် ဆည်းဆာအလှ ကိုကြည့်ရှုခံစားကြပါ မည်။ထို့နောက်ညစာသုံးဆောင်၍ဟိုတယ်တွင်အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူ ပါမည်။
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် ကမ္ဘောဒီးယားဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက် ခေါ်ဆောင်၍ လေဆိပ်သို့ လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
HOTEL USED:3STARS CATEGORY
Hotel in Bangkok – Baiyoke Suite or similar Hotel 3***
Hotel in Siem Reap – Royal Empire hotel or similar Hotel 3***
ပါ၀င်သော မပါ၀င်သော ၀န်ဆောင်မှု
ခရီးစဉ်တွင် ပါ၀င်သော ၀န်ဆောင်မှုများ
ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် Air Con လေအိပ်ကားဖြင့် အကြိုအပို ့
ခရီးစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း နံနက်စာ၊နေ ့လည်စာ နှင့် ညစာကို ကျွေးမွေးဧည့်ခံပါမည်။
ခရီးစဉ်တွင် ပါ၀င်သော လည်ပတ်သည့်နေရာများ၏ ၀င်ကြေးများ
ကြယ်သုံးပွင့် အဆင့်ရှိဟိုတယ်တွင် တည်းခိုစရိတ်
ခရီးစဉ်တွင် မပါ၀င်သော ၀န်ဆောင်မှုများ
လေယာဉ်ဝန်ပိုသယ်ဆောင်စရိတ် (Overweight Charges)
ရေသန် ့၊အချိုရည် နှင့်အဖျော်ယမကာများ
မိမိကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း သယ်ဆောင်ခများ (Poter Charges) များ
အဝတ်လျှော်ခများ (Laundry Service),ကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်များ (Personal uses),Tips
Tips for guide (USD 3/per pax/per day)
ဘွတ်ကင် တင်ကြမယ်! မေးမြန်းမယ်
စျေးနှုန်း : $
Siem Reap,aresort town in northwestern Cambodia, is the gateway to the ruins of Angkor, the seat of the Khmer kingdom from the 9th–15th centuries. Angkor’s vast complex of intricate stone buildings includes preserved Angkor Wat, the main temple, which is pictured on Cambodia’s flag. Giant, mysterious faces are carved into the Bayon Temple at Angkor Thom. ဆက်ဖတ်ရန်
The traveller's first glimpse of Angkor Wat, the ultimate expression of Khmer genius, is matched by onlyafew select spots on earth. Built by Suryavarman II (r 1112–52) and surrounded byavast moat, the temple is one of the most inspired monuments ever conceived by the human mind. ဆက်ဖတ်ရန်
Siem Reap - Angkor Wat - Phnom Penh